Nhau - Iko pamusoro peye kwakakurudzira jira rine yakasimba ngura kuramba
Pamusoro pemucheka wakakora kune yakasimba ngura kuramba
Kwakakurudzira ndiro ndechimwe chezvinhu zvikuru zvigadzirwa zvekambani yedu, kambani yedu inokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine hunyanzvi hwekugadzira michina, uye isu takagadzira hukama hwakawanda hwevatengi. Tevere isu tichaenda kupa yakadzama sumo yezvimiro zve kwakakurudzira ndiro yakatarwa.
Iko pamusoro kwesimbi kwakakurudzira kunowana yakasimba ngura kuramba, yakanaka maitiro mashandiro, uye inobatsira kugadzirwa nekugadzirisa. Nekudaro, iyo yekudhirowa chivakwa chesimbi yakakosheswa jira haina kunaka seyeye inotonhora-yakakungurutswa simbi jira, uye iyo zinc dura iri nyore kwazvo kuti iparadzwe panguva yemagetsi kuwaridza. Kupisa uye kutonhora kwakakurudzira simbi jira muhupenyu hwezuva nezuva kwakakodzera maindasitiri akadai sekurima mota michini nemidziyo, chengetedzo yezviyo uye nemarata evharira bhodhi system, yayo yakakosha chimiro ndeye yakaderera mutengo, uye zvakare yepamusoro kukosha kwakawedzerwa. Nekuti kugadziriswa kwechando chakakungurutswa simbi simbi hakuiti kupisa, saka hatizowana iyo nhema nzvimbo uye iron oxide iyo inowanzoonekwa ichipisa inosunga, inogadzira yakanaka maitiro mashandiro, yakakwira kumeso, uye iwo maratidziro echando anopaza zvinhu zvine yakakwira nemazvo, kutonhora galvanizing kuri kwemagetsi galvanizing ine chete 10-50g / m2 chete, Iyo ngura kuramba kwe zinc zinc yakapesana zvakanyanya kubva kune iyo inopisa dip galvanizing. Mutengo wekugadzira magetsi wekusimbisa kuvaka zvakare wakaderera. Kupisa kunopisa kunongedza pamusoro pesimbi yemuviri pasi pemamiriro ekupisa anopisa, kunamatira kwayo kwakasimba kwazvo, uye hazvisi nyore kudonha. Kunyangwe iyo inopisa dip yakakurudzira pombi zvakare inoratidzika sechiitiko chengura, inogona kusangana nehunyanzvi, hutsanana zvinodiwa munguva yakareba.
Hunhu hwehunhu uye nzira dzinofanirwa kutora zvimwe zvakasarudzika zvinoshandiswa zvinoshandiswa, senge magetsi emagetsi induction, yakaderera alloy ndiro maitiro. Yakakurudzira simbi inowanzo shandiswa senzira yehupfumi uye inonzwisisika nzira yekurwisa-ngura kurapwa. Inenge hafu yezvigadzirwa zvepasi zinc inoshandiswa mukuita uku.